Hunting the jobs: ဒီကကောင်တွေလည်း လိမ်တာပါဘဲ
အထက်ပါ အကြောင်းအရာမှ အေးဂျင့်ဆိုသူ ၏ အီးမေးလိပ်စာမှာ jssjs@singnet.com.sg ဖြစ်ပြီး..လိပ်စာမှာ....
Previously from 101A Upper Cross Street #08-07 People's Park Centre From: jssjs@singnet.com.sg
Subject: RE: Application of YOUR NAME xxxx Post
Date: Mon,3Mar 2008 17:25:45 +0800
Thanks for your application. In this case, can we see u for an interview onWed 5/3/08 9.30 am? Please advice.
(အထက်ပါ အကြောင်းအရာသည်...တန်ခူး ကရေးထားသည်ကို ကျွန်တော်မှ ဖြန့် ဝေပေးခြင်းသက်သက်မျှသာဖြစ်သည်။)
ကျွန်တော်လည်းတတ်နိူင်သလောက်ဝေမျှပါတယ်၊ ဒီကကောင်တွေ လိမ်ရင် ဒီအစိုးရကဘာမှ မလုပ်ဘူးလား၊ အဲဒီလိုဆိုရင် ဒီနိုင်ငံလည်း မကြာခင်ပျက်မှာဘဲ
Posted by Nay Linn Aung at 21:36